Maanta si aad ugu kulanto jikada kursi kursi - ma aha mid aad u yar. Dhammaanteen waan jecel nahay raaxada, jikana waxay noqon kartaa geeska ay jecel yihiin, halkaas oo ay aad u fiican tahay in la isku wada duubo wada cunto iyo wada sheekeysi. Waxaad ubaahan tahay inaad u qalabeysid qalabka guriga oo raaxo leh oo nasasho leh. Kursiga kuraasta kursigu wuxuu u dhexeeyaa habka ugu wanaagsan ee loogu talagalay diyaarinta aaladda cuntada ee jikada.
Faa'iidooyinka kursiga kuraasta ee jikada iyo qolka cuntada
Kursiga kursiga kursi oo raaxo leh oo loogu talagalay jikada oo leh armrests waa heer sare oo raaxo leh. Aad bay u fiicantahay inaad dib u fadhiisatid oo aad nasato nasashada inta u dhaxeysa shaqooyinka guriga ama ka dib maalin shaqo adag.
Intaa waxaa dheer, qaybo sida alaabta, gaar ahaan qaab ciyaareedka naqshadeynta - waa stylish. Iyada oo ay caawinayaan, waxaad awoodi doontaa inaad qurxiso gudaha gudaha iyo meelo qumman oo gudaha ah. Iyo in la xoojiyo xaalada booskaaga, heer sare ah barwaaqo iyo dhadhan fiican. Waxaa jira dhowr kursi oo wanaagsan, sidaa daraadeed waxay si toos ah u soo jiitaan dareenka.
Ha iloobin dhinaca ficilka ee arrinta. Dhammaan kuraasta jikada waa kuwo aad u fudud in la isticmaalo lana ilaaliyo. Qalabaynta, sida caadiga ah, waa laga sameeyey maqaar, iyo haddii kursi armaajo oo aan lahayn fiilo, waa balaastiig ah ama alwaax ah. Si kasta ha noqotee, si mar kale u siiso muuqaal muuqaal ah, waxay noqon doontaa ku filan oo kaliya in la tirtiro kursiga haddii ay jirto xaalad wasakh ah.
Xeerarka lagu dooranayo kursiga jikada
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato cabbirka iyo qaabka alaabta. Marka ay timaado jikada yaryar, tijaabooyinka lafdhabarta ayaa hubaal ah inay ka baxayaan. Xaaladdan waxaa lagama maarmaan ah in la xushmeeyo mabaadi'daha isdhaafka ah, iyo laga yaabo, qaababka xagalka.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato heerka darajada loo rabo ee adag ee kursiga. Waxay noqon kartaa badeecad alwaax ama balaastig ah oo buuxda, ama laga yaabee kursi ku yaal shaan bir ah oo leh kursi jilicsan ama rattan.
Haddii aad leedahay bar halkii aad ka heli lahayd miis, waxaad u baahan tahay inaad dooratid, siday u kala horreeyaan, kuraasta bararka , horay loo qiyaaso dhererka rafcaanka iyo go'aaminta dhererka loo baahan yahay ee lugaha ee kuraasta.
Isku darka cawlka gudaha
Qalabka qurxinta ee guriga
Gudaha dhismaha hudheelka guriga
Muxuu yahay midabka rinjiga midabada?
Kursiga koraya ee carruurta
Sheyga wax lagu ciyaaro
Sariir laba qoryo qoryo leh
Goob shaqo ee balakoonka
Qolka noolaanshaha midabka midabada leh
Rihanna ayaa ka careysiisay codsiga cusub ee Snapchat iyo kaftanka isticmaalka rabshada
Maraq Pumpkin leh hilib shiidan
Sidee loo joojiyaa qufaca ilmaha?
Salaadda habeenkii - salaadda ugu xooggan, akhriso ka hor wakhtiga jiifka
Bikini yar yari
Timaha dumarka ka dib 40 sano
Kombiyuutarka qaxwada leh gacanta
Sidee loo qaabeeyaa bangiyada?
Boris Becker oo ah xaalad aad u ba'an ayaa ku riixeysa inuu sameeyo hawlo macquul ah
Xilliyaadka Celinta ee 2014
Duufaan qallafsan, ama isbeddel aan caadi ahayn 10 sano kadib
Apple liiska guriga
Baastada leh salmon ee suugo creamy ah
Banana Liqueur guriga
Tikradaha qurxinta ee sannadka 2014
Adele wuxuu 33 jeer ku dhuftay min 90 daqiiqo
Isticmaalka halva ee caafimaadka iyo miisaan lumis